China Torsional shiee kpọchie maka ígwè Ọdịdị Manufacturer na Supplier | Tailian Fastener
Hot itinye kpaliri bolt
Hot itinye kpaliri aku
Hot itinye kpaliri agbakwunyere akụkụ
Dichaa eriri waya
Torsional shiee kpọchie maka st ...
Large hegzagon bolt nke ígwè ...
Cylindrical isi ịgbado ọkụ ntu
Mgbapu osisi nke torsional maka nhazi ígwè
Ngwongwo nchara ígwè bụ ụdị ihe eji eme ihe dị elu na otu ụdị ọkọlọtọ. A na-ejikarị ihe eji eme ihe eji arụ ọrụ ígwè iji jikọta njikọ njikọ nke efere ígwè. A na-ekewa usoro ihe eji eme ka ígwè rụọ ụdị ọkpụkpọ torsional nke ụdị ike dị elu na nnukwu hexagonal dị elu.
Ngwongwo nchara ígwè bụ ụdị ihe eji eme ihe dị elu na otu ụdị ọkọlọtọ. A na-ejikarị ihe eji eme ihe eji arụ ọrụ ígwè iji jikọta njikọ njikọ nke efere ígwè. A na-ekewa usoro ihe eji eme ka ígwè rụọ ụdị ọkpụkpọ torsional nke ụdị ike dị elu na nnukwu hexagonal dị elu. Nnukwu ihe nkedo dị elu nke hexagonal dị na ọkwa dị elu nke kposara ndị nkịtị, ebe torsional shear type bolts dị elu bụ mmụba nke nnukwu hexagonal. Maka ịrụ ụlọ ka mma, a ga-ekwusi ike iji wuo ihe owuwu ígwè ma mechaa. N'ihi na mbu tightening nke ígwè Ọdịdị bolts, mmetụta ụdị electric wrenches ma ọ bụ torque kemeghi electric wrenches na-achọrọ. Ikpeazụ tightening nke ígwè Ọdịdị bolts nwere nlezianya chọrọ. Nkpuchi ikpeazụ nke torsional ụdị ụdị nchara ígwè ga-eji ụdị nkedo eletriki na-emegharị ihe, na njedebe ikpeazụ nke ụdị ụdị nchara ígwè ga-eji eriri igwe eletrik. Todị ụdị nchara nchara ụdị nke mejupụtara mejupụtara bolt, a nut, a ụdị torsional shear ụdị nnukwu ike bolt nchara ụdị nnukwu hexagonal bolt na a washer.
Nke gara aga: Dichaa eriri waya
Osote: Pụrụ ịdabere soplaya Mere na China fasteners U kpọchie kpọchie na aku T Isi kpọchie Flange kpọchie Anchor kpọchie U-kpọchie N'ibuli Anya kpọchie Allen kpọchie Stud kpọchie na Hex akụ na Ewepụghị Washer
Mgbapu osisi nke torsional
Hot itinye kpaliri stud
Eldgbado ọkụ efere arịlịka
Ndị na-ekpo ọkụ-itinye galvanized nut
Akwa ume U-bolt
Elon Musk nke Tesla na-ekwu maka otu ịme ihe nkedo na usoro mmezi nkwekọrịta ya
Hebei tailian fastener n'ichepụta co., Ltd a họọrọ dị ka otu n'ime n'elu 500 onwe ụlọ ọrụ na China.
Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd. alaghachila ọrụ na ịgbagharị zuru oke
Faksị: 0086- （0） 310-6666399